10W 30W 50W 80W LED nalka biyaha aan korontada ahayn IP65 KNFL-001 iftiinka daadka,Iftiinka Daadka Led,Guzheng Town Led Home Decorative,Constant Current Led Products - Shiinaha 10W 30W 50W 80W LED nalka biyaha aan korontada ahayn IP65 KNFL-001 iftiinka daadka, Soo saaraha & Qalabka
10W 30W 50W 80W LED nalka biyaha aan korontada ahayn IP65 KNFL-001 iftiinka daadka. Nalaheena nalalka LED-ku waxay si firfircoon u shaqeeyaan isla markaana badbaadiyaan awooda laakiin sidoo kale waxay yareeyaan kharashyada dayactirka iyo adeegga iyadoo ay sabab u tahay noloshooda dheer. Duufaannada caadiga ah ee caadiga ah waxay u baahan yihiin beddelaad isdaba joog ah oo si joogto ah loogu baahan yahay adeeg inta lagu jiro xilliyada shaqada ee muhiimka ah. LED Floodlights waxay kaa caawineysaa badbaadinta kharashka iyo kordhinta waxtarka adoo hubinaya in shaqadu weligeed la joojin doono sababtoo ah nalalka maqan, burburay, ama la gubay. Qaar badan oo ka mid ah daadadkeena ayaa xakameyn kara by dmx512 singal.Control mode: Habka madaxbannaan / Master / Function DMX / RGB ama Deganaansho( 10W 30W 50W 80W LED nalka biyaha aan korontada ahayn IP65 KNFL-001 iftiinka daadka )
©2005-2018 Karnar Nala soo xiriir Khariidadda bogga Last modified: February 27 2021 03:26:20.